Raila Odinga oo booqanaya xerooyinka qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari - BBC News Somali
Raila Odinga oo booqanaya xerooyinka qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari
14 Luulyo 2011
Image caption Raiisalwasaaraha Kenya Odinga
Ra'iisal Wasaaraha Kenya, Raila Odinga, ayaa waxaa uu sheegay in la furayo xerada Ifo2 oo sanado u xirnayd muran siyaasadeed. Ifo2 waxay ka tirsan tahay Xeryaha Dhadhaab, oo horay sadex u ahaa, waxay hadda noqonayaa 4 xero.
Raila Odinga waxa u booqday xeryaha qaxootiga ee ay ka mid yihiin Dadhaab, kuwaasi oo ku yaal gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Xerada Dhadhaab oo buux dhaaftay, waxa lagu qiyaasay tiraa dadka haatan ku jiraana inay kor u dhaaftay ilaa 370,000 oo qof, halkii markii hore loogu talo galay 90,000.
Image caption barakacayaasha Somalia
Maalin kasta, qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay Somalia ee u tallaabaa dhinaca xadka Kenya ayaa lagu qiyaasay ilaa 1,300 oo qof, inta badanna waxay aadaan xeroyinkii hore ugu yaalla goboka waqooyi Bari oo dhan 3 xero.
Hey'adaha gargaarka iyo qaxootiga ee Qaamaa Mdoobay ayaa haatan ku talinaya in isla degaannadaasi laga uro xero afraad oo cusub, ahna IFO2, oo qaadi karta laa 40000 oo qaxooti ah.
Hasse ahaatee, codsigani waxa ka soo horjeeda dhinacyo ka tirsan dawlada Kenya oo iyagu qaba in qaxootigan ka imanaya Somalia ay soo kordhin karaan cabsi iyo halis ku timaadda naadgelyada Kenya iyo gobolkaba.
Madaxweynaha Kenya, Mwai Kibaki, waa uu isagu ku baaqay inay habboon tahay in heyadaha gargaarku ay taakulaynta qaxootiga Somaliada ugu geeyaan oo ay ku siiyaan Somalia gudaheeda.
Boqashana Raila Odinga, ayaa ku soo beegmaysa waqti uu jiro murankaasi iyo xaaladda daka qaxootiga ah ee ka soo barakacay Somalia ee soo gelaya Kenya oo tiro ahaanna soo badanaysa, daryeel ahaanna aad u liidata.